VOHILENGO : Andramena 59 saron’ny Zandarimariam-pirenena Fenoarivo-Atsinanana
Nahazo loharanom-baovao ny borigadin’ny Zandarimariam-pirenena Fenoarivo-Atsinanana fa misy tokantrano iray ao amin’ny Kaominina Vohilengo mitahiry andramena. 19 août 2019
Kaominina Vohilengo izay ao anatin’ny distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana no misy azy. Andramena tsy nanaovana fanambaran-tahiry (déclaration de stock). Ny zoma 16 aogositra, nisy ny fidinana tampoka natao. Voamarina ny fisian’ireo Andramena ireo tao amin’ilay tokantrano izay 150 m eo ho eo miala ny seranan-dakana ao amin’ny fokontany Morondrano. Olona roa ( lahy sy vavy) nosamborina nohenoina anaovana fanadihadiana. Ilay lehilay izay tompon-dakoro nipetrahan’ireo andramena raha ilay vehivavy kosa no voalaza fa tena tompony.
Ny antoandron’ny sabotsy 17 aogositra, nisy ny fidinana ifotony tao Vohilengo nataon’ny solontenam-panjakana izay notarihin’ny Sekretera Jeneralin’ny Prefekioran’i Fenoarivo-Atsinanana, Razafimanantsoa Jean Jacques. Teo ihany koa ny avy amin’ny sampandraharaham-paritry ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra ao Analanjirofo nahitana ny talem-paritra vonjimaika Rahendrimanana José Christian. Niara-dia tamin’ny delegasiona tao Vohilengo ny Kaomandin’ ny borigadin’ny Zandarimariam-pirenena Fenoarivo-Atsinanana Adjudant-Chef Ramasivelo Andriatsarafiidy Martin ary ny ben’ny tanànan’i Vohilengo Sandy Chan Hing Tack.
Fantatra nandritra izao fidinana izao fa miisa 59 ireo tapatapaka andramena hita tao amin’ ilay tokantrano. Ny taona 2012 sy 2013 teo ho eo no nanomboka nitehirizana azy. Mirefy 1 m ka hatraminy 1 m sy 50 ny halavany. Manodidina ny 18 cm kosa ny habeny. Notaterina ao Fenoarivo-Atsinanana ary nogiazana ao amin’ny Miaramiila 2e Blig ireo hazo sarobidy sarona ireo. Mitohy kosa ny famotorana ireo olona roa ka hatolotra ny fampanoavana tsy ho ela. Enjehin’ny lalàna ny fitehirizana hazo sarobidy tsy nanaovana fanambaram-pitehirizana.